Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka oo ku jira ardayda u fadhisa imtixaanka KCSE – The Voice of Northeastern Kenya
Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka oo ku jira ardayda u fadhisa imtixaanka KCSE
4 xildhibaan oo ka tirsan aqalka baarlamaanka dalka ayaa ka mid ah boqolaalka ardayda ah ee u fadhisa imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare.
Mudaneyaashaan oo laga soo doortay qeybo kala duwan oo dalka ah ayaa imtixaanka ku galaya xarumo ku yaalla maamul goboleedyada Uasin Gishu iyo Baringo, sida ay maanta shaaciyeen qaar ka mid ah jaraa’idka kasoo baxa dalka.
4-ta xildhibaan ayaa la sheegayaa in ay imtixaanka isugu diiwaan galiyeen qaab shaqsi ah oo ay si gaar ah uga qeyb galayaan imtixaankaasi.
Agaasimaha hay’adda wax barashada dadka waaweyn ee Acacia Benjamin Cheboi ayaa shalay sheegay in dadka imtixaanka isku diiwaan galiyay ay ku jiraan xildhibaanno, in kastoo uu ka gaabsaday in uu shaaciyo magacyadooda.
Sarkaalkaasi ayaan sidoo kale kala cadeynin in xildhibaannadaasi ay markii ugu horeysay imtixaanka galayaan ama in ay horay marar kale usoo galeen.
Hase ahaatee wargeyska The Star ee kasoo baxa Kenya ayaa maanta sheegay in baaritaan uu sameeyay uu ku ogaaday in xildhibaannadaasi 2 ka mid ah ay kasoo jeedaan Baringo, mid uu kasoo jeedo Uasin Gishu, halka midka 4-aadna uu kasoo jeedo maamul goboleedka Bungoma.
Waaxda wax barashada ayaa dhawaan sheegtay in dadka imtixaanka ku jira ay ka mid yihiin 25 qof oo waaweyn oo aan ahayn ardayda Schoollada dhameysatay.
← Shacabka Mareykanka oo maanta dooranaya madaxweyne cusub
Qaramada Midoobay oo shaacisay tirada dadka ku dhintay dagaallada Yemen →